Uninzi lwethu ikhawuntala yeenyawoIimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Ukuthintela ukukopa, khange sibeke umxholo omninzi kwiwebhusayithi. Ungaqhagamshelana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumele ulwazi oluthe kratya malunga nathi ikhawuntala yeenyawo.
Sisebenzisa oku ikhawuntala yeenyawoisivamvo sokubonelela ngesisombululo sokubaleka esisebenza ngokukhawuleza, esilula nesisebenza ngokukuko kumathala eencwadi amaninzi, iimyuziyam, amabala amnandi, iivenkile ezithengisa izinto, iivenkile ezinkulu kunye nezinye iindawo ekhaya nakumazwe aphesheya. Okuikhawuntala yeenyawo inokusetyenziselwa ulawulo lokuhlala oluzenzekelayo.
HPC015S ikhawuntala yeenyawo i-ultra-encinci, ibhetri-inikwe amandla, ukuhamba kwe-WIFI yokuhamba kwabagibeli. Iseti enye yezixhobo ezinokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Isikrini sicacile kwaye sihlaziyiwe ngexesha lokwenyani. Akukho zindleko zifunekayo. Unokukhetha indlela yenethiwekhi okanye imo yokuma yodwa.
Xa ifayile ye- umatshini wokubala weenyawo isebenzisa indlela yenethiwekhi, i ikhawuntala yeenyawoibonelela nge-WIFI-AP yenethiwekhi ye-hotspot kunye nenkonzo yeWEB eyakhelweyo. Emva kokuqhagamshela kunye nokungena ngemvume ngemvume ngayo nayiphi na ifowuni eyi-smart (i-Android, i-IOS), sebenzisa iphepha leWEB ukuseta iiparameter zesiphelo sendlela yokubala abagibeli Okanye ukhangele idatha, iseva ishwankathela kwaye inike iingxelo ezahlukeneyo zohlalutyo, ukumisa iinkqubo zomntu wesithathu okanye ulwandiso lomsebenzi.
Inzwa yokuwa kweenyawo ingagcina irekhodi lokuhamba kwabahambi ngokwexesha elimiselweyo, kwaye ulayishe irekhodi lokuhamba kwabahambi kumncedisi ochongiweyo rhoqo ngokwexesha elimiselweyo.
Ikhawuntala yeenyawo ikwabonelela ngenkxaso epheleleyo yezobuchwephesha ukunceda kuphuhliso lwesibini, iifowuni zomnxibelelanisi we-API kunye nophuhliso lwesibini, ukubonelela ngokugqibeleleyo umatshini wokubala weenyawoInkqubo yonxibelelwano kunye nenkxaso yezobuchwephesha enxulumene noko, kunye neendlela ezahlukeneyo zokwenza idatha. Iqonga lisebenzisa iiseva zobuchwephesha ukubonelela ngamava ezicelo ezigudileyo nezintofontofo, iseva ezimeleyo yokugcina idatha ukuqinisekisa ukuthembeka kwedatha.
Umbala Mnyama okanye mhlophe
Umdibaniso Ngaphandle kwamacingo, inkxaso yemodyuli yeWifi
Ububanzi Ubhaqo 1-20 yeemitha
Ibhetri ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-1.5 (ibhetri esemgangathweni yamazwe aphesheya)
Indlela yokujonga idatha Iselfowuni okanye iPC
Kutheni ukhetha i-MRB footfall counter?
1. Ngokweenguqu kwidata yokuhamba kwabantu ebalwa ngu ikhawuntala yeenyawo, Iindawo ezikhethekileyo kunye namaxesha akhethekileyo anokugwetywa, kwaye ulawulo lwepropathi, ulondolozo kunye nokhuseleko lunokucwangciswa ngokufanelekileyo ukunqanda ilahleko engeyomfuneko yepropathi.
2. Ukuhamba komkhweli kwindawo ephambili ebalwe ngu fisivamvo ootfall ibonelela ngesiseko sesayensi kulwakhiwo oludibeneyo lommandla wonke.
3. Ngokusebenzisa amanani-manani kunye nokuthelekisa ukuhamba kwabakhweli ngamaxesha ahlukeneyo, ukuphonononga inzululwazi ngobungqongqo beqhinga lokusebenza lokuthengisa ngentengiso.
4. Ngokuhlalutya idatha kwi ikhawuntala yeenyawo, ukumisela ngokuchanekileyo inqanaba lexabiso lendawo yokuqeshisa yeevenkile.
5. Ngokwenani labakhweli abaxakekileyo kule ndawo, amandla oluntu anokuhlengahlengiswa ngokufanelekileyo ukulawula iindleko.
6. Ukubonelela ngesiseko sesayensi sokwandisa uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kunye nolonyuselo ngokusebenzisa amanani abantu abahambahamba.
7. Ngokusebenzisa isivamvo seenyawo, Umndilili wamandla enkcitho yokuhamba kwabahambi kunokubalwa ukubonelela ngesalathiso sokubekwa kwemveliso.
8. Ngokusebenzisa i umatshini wokubala weenyawo, iiyure zeshishini zinokucwangciswa ngokufanelekileyo kunye nokulahleka kweendleko kungancitshiswa.
Isebenza njani ikhawuntara yeenyawo?
Umgaqo wokubala: Itekhnoloji yokwahlulahlula, i-infrared radiation.
Indlela yokulayisha idatha: ukulayishwa kwedatha kwiseva yamafu ngeWIFI engenazingcingo.
Idatha yokubonisa: I-OLED enkulu yesikrini esiboniswa ngexesha lokwenyani lokungena kunye nedatha yokuphuma.
Ububanzi bokuchonga: ngaphakathi 1-20 yeemitha, ngaphandle 1-16 yeemitha.
Indlela yokubala: inani lokungena nokuphuma kwabahambi linokubalwa ngokwahlukeneyo.
Indlela yokujonga idatha: faka i-URL kwifowuni ephathekayo okanye kwi-PC ukungena kwiphepha lewebhu, ungene kwigama le-akhawunti kunye negama lokugqitha ukuze ujonge, kwaye unokufikelela kwidatha yamaxesha ahlukeneyo wokubukela.
Indlela yofakelo: lungisa isixhobo sokuhambisa infrared kunye ne-infrared kumphakamo ofanayo kumacala omabini esiteshi, ukunqanda izithintelo embindini, kunye nokuphakama kofakelo kuphakathi kweemitha eziyi-1.2-1.4.
Imowudi yokuhambisa umbane: Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USD, umbane webhetri ye-lithium etshajekayo (inokusetyenziselwa malunga neenyanga ezi-3 emva kwentlawulo).
Idatha yedatha yeevenkile ezahlukeneyo inokujongwa kwiakhawunti efanayo, ilawulwa ngaxeshanye, kwaye ukuthelekiswa kwedatha kunokwenziwa.
Ulawulo lokuhlala lunokusetwa yi ikhawuntala yeenyawo isoftware.
I-HPC015S yevidiyo yevidiyo yeenyawo
Sineentlobo ezininzi ze-IR ikhawuntala yeenyawo, 2D, 3D, AI ikhawuntala yeenyawo, kuhlala kukho enye eya kukufanela, nceda unxibelelane nathi, siya kuncoma eyona ilungileyo ikhawuntala yeenyawo yeyakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo Umatshini wokubala we-MRB USB wevenkile ye-HPC015U
Okulandelayo: I-MRB engenazingcingo yabantu bedijithali abaphikisana neHPC005U
I-Contrared Beam Counter
Ikhawuntari ye infrared
Ukuchasana nabantu be-Infrared
Ikhawuntara yeTrafikhi yeNdlela